Ukwenza ubuNtu kweNtengiso: Iindlela ezi-4 zeSiseko esiphumelelayo | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-13 kaDisemba ngo-2016 Lwesine, Disemba 15, 2016 Douglas Karr
Ukwenza ubuqu kuyo yonke ingqumbo okwangoku kodwa sisicwangciso esinokukuthuka ukuba senziwe ngokungachanekanga. Masithathe owona mzekelo uqhelekileyo- uziva njani xa ufumana umyalezo we-imeyile apho uvuleka khona, Mthandi %%Igama lokuqala%%… Ayonto imbi leyo? Ngelixa lo ngumzekelo ocacileyo, okungaqondakali kangako kukuthumela izibonelelo ezingafanelekanga kunye nomxholo kuluntu lwakho. Oko kufuna isiseko esikhoyo.
Ityebile, inamandla, ihambelana namava ekujoliswe kuwo enza ubomi bube lula kubathengi kunye nokwandisa ukusebenza kwenkcitho yentengiso kwiinkampani. Ngokwenene uloyiso-wonke umntu.
Le infographic evela kwiNtengiso ye-MDG ihamba ngedatha esuka kwiAdobe, iAberdeen Group, iAdlucent kunye nolunye uphononongo olushwankathela iziseko eziphambili ezi-4 zempumelelo.
Ismart vs. amaqhinga esisidenge: Ukwenza umntu kuthetha okungaphezulu kokulula kubandakanya igama. Ukwenza ubuqu esisiseko kunefuthe elincinci kuthethathethwano; Nangona kunjalo, imiyalezo esekwe kwizenzo ezithile zomsebenzisi inenqanaba elivulekileyo le-2X kunye nenqanaba lokucofa elingu-3X xa kuthelekiswa ne-imeyile esemgangathweni. Funda indlela ekujolise kuyo ekujolise kuyo sisitshixo sokwenyani sokuzibandakanya ngokufanelekileyo.
Umbono omnye womthengiAbathengi bathi izibonelelo eziphezulu zokwenza umntu zimbalwa zentengiso / imiyalezo engabalulekanga, ukufunyanwa ngokukhawuleza kweemveliso / iinkonzo ezintsha, kunye nokunxibelelana kokuthenga okuphezulu. Ukuhambisa la mava kunye nokusebenzisa amandla ekujoliseni ufuna isityebi, uhlaziya rhoqo iiprofayili zabathengi. Fumanisa ukuba kutheni umbono omnye womthengi sisiseko sempumelelo.
Idatha kunye neenkqubo: Ukwenza ubuqu kunye nedatha / iinkqubo azixhunyiwe nje kuphela, zidibene ngokusisiseko. Kulabo bathengisi abathi abenzi umxholo, i-59% ithi eyona nto iphambili kubuchwephesha kwaye i-53% ithi abanalo ulwazi oluchanekileyo. Jonga ukuba utyalomali kumaqonga alungileyo kwaye abantu banokuhlawula njani kakhulu.
Ukungafihlisi nokhuseloAbantu bahlala belumkele ukwenza ubuqu kuba abaqinisekanga ukuba idatha isetyenziswa kwaye igcinwa njani. Kungenxa yoko le nto ulawulo nokhuseleko lubaluleke kakhulu. Abanye i-60% yabasebenzisi abakwi-Intanethi bafuna ukwazi ukuba iwebhusayithi ikhetha njani umxholo wabo kwaye i-88% yabathengi bakhetha ukumisela ukuba idatha yabo iya kusetyenziswa njani. Qonda indlela efanelekileyo yokujongana nezi nkxalabo.
Ukufumanisa ukuba ungazenza njani ezona ndlela zokwenza uphawu lwakho, jonga Amanyathelo ama-4 okuVula aMandla oNene oThengiso lobuNtu.
tags: umbono wabathengiukufikelela kwedathaUkhuseleko LwadathaUkucaciswa kwedathamdg intengisoNgokwezifisoidatha yokwenziwa komntuukhuselekoKuhleni